Qoraha Sawirka ROSA: Maareeye Fudud oo loogu gubo sawirada ISO USB | Laga soo bilaabo Linux
Adduunyada ee Codsiyada GNU / Linux waxaa jira xulashooyin badan oo kala duwan, xaga qalabka ama Maareeyayaasha gubida feylasha muuqaalka ISO ee darawalada USB. Maantana, waxa weeye wicitaan yar oo la yaqaan Qoraa Sawir Rosa.
Qoraa Sawir Rosa waa barnaamij yar oo indho-qabad ah oo ay abuureen ayna u qaybiyeen kooxda Ruushka ama hay'adda loo yaqaan RuushLab, oo isna isagu leh tiisa GNU / Linux Distro wac Desktop ROSA. Sababta sababta, waxaa si gaar ah loogu talagalay in, lagu daro, si fudud oo toos ah u duubto kala duwan Faylasha ISO mid ka mid ah Wadada USB, u samee si hufan oo wax ku ool ah faylasha ISO ee la yiraahdo Russian Distro.
Waxaa mudan in la xuso, kuwa aqoonta u yar ee la sheegay GNU / Linux Distro Ruush Desktop ROSA in ay tahay qaybinta loogu talagalay dadka jecel GNU / Linux adduunka oo hadda loo socdo nooca ROSA Desktop Fresh R10. Version ku dhashay sii daayo labaad oo ku saleysan madal casaan ah 2016.1, taas oo iyaduna leh 2 sano oo taageero caadi ah iyo 2 sano oo taageero dheeri ah, isla markaana la cusbooneysiin doono amnigooda illaa dhamaadka 2020, sida ay sheegeen horumariyeyaasheeda.
Hadda, ROSA Desktop Fresh R10 Waxay leedahay laba bey'adood oo rasmi ah (Plasma 5, KDE 4) iyo laba bey'adood oo iswaafaqsan oo leh taageerada bulshada (LXQt, Gnome 3). Ugu dambeyntii, wixii macluumaad dheeraad ah ee arrintan ku saabsan GNU / Linux Distro Waxaad booqan kartaa xiriirka rasmiga ah ee soo socda isku xirka ka wiki, ama midkan shirkadda horumarinta Linux Linux ee loo yaqaan LLC NTC IT ROSA.
1 Qoraa Sawirka ROSA
1.2 Sidee u shaqeysaa?
1.3 Ma ku habboon yahay qaybinta kale?
Qoraa Sawirka ROSA
Ku saabsan codsigeenna daraasadda ku jirta qodobkan, taasi waa, Qoraa Sawirka ROSA iyo sida aad degel rasmi ah, isku mid:
Waxay timaaddaa horay loogu rakibay nooca ugu dambeeya ee la heli karo ee ROSA Desktop Fresh R10
Waa lagu rakibi karaa mid kale Nidaamka Howlgalka GNU / Linuxmarka lagu daro Windows iyo Mac OS X, adoo adeegsanaya faylalka binary-ka ah (kuwa la fulin karo) oo leh cabirrada soo socda:
Koodhkeeda ilaha waa la heli karaa, soo socda Kaydinta ABF.
Sida oo kale MX-Linux Distro iyo dalabkiisa hooyo (iska leh) "MX Dhis Live-USB" (MX Live USB Maker) in si guul leh loogu duubo a Wadada USB, ka ROSA Desktop Distro Waxay u baahan tahay codsi gaar ah ujeedkan, maadaama ay leedahay qaab dhismeed isku dhafan.
Taas oo macnaheedu yahay, Desktop ROSA waxaa ku jira madax Sawirada ISOiyo sidoo kale miisaska xiisaha xijaabka bootka ee loo isticmaalo darawalada adag iyo flash drives. Sidan oo kale, in dalab u gaar ah oo keliya loo baahan yahay in lagu qoro xoogaa yar disk disk ah feylka ISO dhib la'aan. Sida, haddii ay jiraan GNU / Linux Distro qalabka xariijinta taliska caadiga ah ee la yiraahdo "Dd". In kasta oo, adeegsiga qalabkani u baahan yahay xoogaa xirfad ah iyo taxaddar badan si looga fogaado in dib loo qoro saxanka khaldan.
Ma ku habboon yahay qaybinta kale?
Soosaarayaasha aaladda waxay muujinayaan in tani ay ku xirnaan doonto GNU / Linux Distro uu doortay adeegsadaha. Laakiin way xaddidayaan, taas haddii la yiraahdo faylasha Sawirada ISO qaar ka mid ah GNU / Linux Distros ayaa loo qori karaa a flash disk (USB Drive) isticmaalaya amar "dd" ama qalab kale oo la mid ah oo nuqullo ka sameeya, sidaa darteed haa, Qoraa Sawirka ROSA waxaa loo isticmaali karaa in lagu sameeyo isla.
Haddii, on lid ku ah, ayaa sheegay in files of Sawirada ISO waxay u baahan yihiin qalab aad u horumarsan, qeybtaas disk-ka flash-ka ah, u qaabee, nuqul ka dhig xogta sida faylal go'an, iyo howlaha kale ee gaarka ah, sidaa darteed maya, Qoraa Sawirka ROSA ma noqon doonto mid wax tar leh.
Si aad ula tashato aalado kale oo faa'iido leh aaggan, waxaan kugula talineynaa inaad aqriso qoraalkeena xiga ee soo socda oo ku saabsan mowduuca:
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ku saabsan barnaamijkan yar ee dhalaalaya ee loo yaqaan «ROSA Image Writer», taas oo noo ogolaaneysa inaan si fudud oo toos ah u duubno noocyo kala duwan Faylasha ISO mid ka mid ah Wadada USB, gaar ahaan kuwa ay ku jiraan Ruushka GNU / Linux Distro wac «ROSA Desktop», oo ah abuuraha dalabka la yiri; noqo wax badan dan iyo utility, Dhammaan «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Qoraha Sawirka ROSA: Maamulaha fudud ee lagu gubayo sawirada ISO USB
Sandboxie: Daahfurka barnaamijka Windows-ka sida Meel Furan